अर्बौँको छात्रवृत्ति छरपस्ट वितरण – SidhaRekha
२०७४ पुष ९, आईतवार ०७:४५ December 24, 2017
सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँको छात्रवृत्ति भद्रगोल रूपमा वितरण भइरहेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म छात्रवृत्तिमा अर्बौँ खर्च भए पनि एकीकृत रूपमा व्यवस्थित नहुँदा उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन ।
यस वर्ष शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत गरी दुई अर्ब ११ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षा विभागमार्फत दुई लाख ७८ हजार ६५५ विद्यार्थीका लागि ९९ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ वितरण हुँदै छ । त्यसैगरी, सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा र दलितका लागि एक अर्ब ११ करोड ८७ लाख आठ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा गरिसकेको छ । स्थानीय तहलाई पठाएको रकम गैरआवासीय छात्रवृत्ति हो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
शिक्षा विभागबाट १४ किसिमका छात्रवृत्ति
शिक्षा विभागमार्फत ०७४-७५ का लागि १४ प्रकारका छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । यो १४ प्रकृतिका छात्रवृत्ति झन्डै तीन लाख विद्यार्थीलाई वितरण हुनेछ ।
१. अति विपन्न वर्गबाट कक्षा ८ उत्तीर्ण भएर कक्षा ९ मा भर्ना हुन नसकेर विद्यालय छोड्ने अवस्था भएका बालबालिकालाई नमुना विद्यालयमा अध्ययन गर्न आवासीय छात्रवृत्ति
२. कक्षा ९ र १० का लागि अपांगलाई आवासीय छात्रवृत्ति
३. कक्षा ९ र १० का लागि अपांगलाई गैरआवासीय छात्रवृत्ति
४. आधारभूत तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि आवासीय छात्रवृत्ति
५. आधारभूत तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि गैरआवासीय छात्रवृत्ति
६. आधारभूत तहमा अध्ययनरत लक्षित समूह–२२ जनजाति तथा सीमान्तकृत समूह, मुक्तकमैया, बादी, हलिया, चरुवाका सन्ततिसमेतका लागि छात्रवृत्ति
७. एसएलसी (अहिले एसइई) मा समावेश भएका दलित छात्रछात्राका लागि ब्रिजकोर्स तथा छोटो अवधिको सीप विकास तालिमका लागि प्रोत्साहनस्वरूप पटके छात्रवृत्ति
८. द्वन्द्वपीडित छात्रवृत्ति गैरआवासीय
९. माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति (९–१०) गैरआवासीय
१०. मुक्त कम्लहरी, हिमाली छात्रावास, फिडर छात्रावास, नमुना विद्यालय, हिमाली आवासीय, अति सीमान्तकृत समुदायका लागि सञ्चालित आवासीय बालबालिकालाई आवासीय छात्रवृत्ति
११. मुक्त कम्लहरीका लागि छात्रवृत्ति
१२. सहिदका छोराछोरीहरूका लागि छात्रवृत्ति
१३. हिमाली आवासीय विद्यालय छात्रावासका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति
१४. हिमाली जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा छात्रावास सुविधा विस्तार
अघिल्लोप्रश्नपत्रमा हदै लापरबाही
पछिल्लोप्रहरीको गोली लागि मारिएका ऐडीलाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्दै प्रदर्शन